फाल्का, आर्टुरो पेरेज-रिभर्टे द्वारा। "म खुट्टाको हिंड्ने बित्तिकै तिनीहरू म माथि हिंडे। | वर्तमान साहित्य
फाल्का, आर्टुरो पेरेज-रिभर्टे द्वारा। "म खुट्टाको हिंड्ने बित्तिकै तिनीहरू ममाथि हिंड्छन्।"
मारियोला डियाज-क्यानो अरेवलो | | कालो उपन्यास
फाल्को, आर्टुरो पेरेज-रिभर्टेको अन्तिम उपन्यास।
त्यो वाक्यांश हो जुन आर्टुरो पेरेज-रिभर्टेले सिर्जना गरेको नयाँ चरित्रको नैतिक चरित्रको सारांश दिन्छ। त्यो एक, वा उसको मालिक, एडमिरलले एक रात उनलाई उनलाई भन्छ जब उनी वर्दीमा देखिन्छन्: "तपाई परिवर्तन हुनुभएको छ, समय-समयमा आदर देखाउनु ठीक छ।" अन्यथा, उहाँ सबैभन्दा आकर्षक, सुरुचिपूर्ण, कुशल र घातक जासूस हुनुहुन्छ। १ 1936 ofXNUMX को स्पेनमा, हतियारको भरमा, केनाइट जहाजमा ब्यान्ड गर्न उनी जस्तो कोही पनि आदर्शवादको भेषमा परेनन् जुन देश बने।
पछिल्लो अक्टोबर १ 19 देखि बिक्रीमा, मैले यो चार दिन पहिले पाएँ, ती व्यक्ति जुन मलाई यो पढ्न लग्यो। र मेरो खास भावना पढ्नको आनन्दमा बढी केन्द्रित भएको भए यो कम समयमै भएको थियो। जे भए पनि, यो छोटो उपन्यास p होईरो न त मलाई उत्साहित बनाएको छ न त मेरो थमाई नै छ। र यो दुबै को लागी भौतिक छ। यद्यपि म यो कुरा दोहोर्‍याउँछु कि यो नम्र राय मेरो हालको पढ्ने भावनाको कारणले हो। वा त्यो मैले पहिले नै यस्तै पढेको छु। हामी मध्ये जो Reverte लाई प्रशंसा गर्दछौं सामान्यतया उसको जीवन बताउने तरिकाको आनन्द लिन्छ, तर यस बखत म अझ धेरै खोजिरहेको छु।
1 Lorenzo Falcó को बारे मा
2 निर्विवाद शैली
3 मेरो बुट
Lorenzo Falcó को बारे मा
मैले Reverte का प्रायः सबै उपन्यासहरू पढेको छु, यद्यपि मैले स्वीकार गर्नुपर्दछ केहि बर्षको लागि म उनको कास्टिकता, हिम्मत र शिष्टाचारलाई लेखकको रूपमा भन्दा स्तम्भकारको रूपमा रुचाउँछु। त्यसैले म उनको साथ प्रेस मा अधिक उहाँलाई अनुसरण कोर्सोको प्याटेन्ट र भोजमा ट्विटरमा प्राय जसो उसको हस्तक्षेप हो। तर म हरेक नयाँ उपन्यास र यो पढ्न प्रयास गर्दछु फाल्को यो मेरो ध्यान अघिल्लो भन्दा बढी आकर्षित भयो।
फाल्काको लागि, मातृभूमि, प्रेम वा भविष्य जस्तो शब्दहरूले कुनै अर्थ राख्दैन।
न त देश, न झण्डा, न माया, न सम्मान, न शर्म। फाल्का केवल आफ्नो जीवनको उत्तम औंलामा जीवन बिताउन रुचि राख्छन्: सबै प्रकारका विलासिता र महिला जसले तिनीहरूलाई झण्डा बनाउन प्रयास गर्छन्। पूर्व हतियार तस्कर, खुफिया सेवा एजेन्ट, र केहि पनि समावेश छ, जबसम्म यो साहस र व्यक्तिगत लाभ शामिल छ। सबै थोरै वा कुनै scruples को साथ।
यसैले, १ 1936 XNUMX को पतनमा, फाल्काले SNIO- राष्ट्रीय सूचना र अपरेशन सेवा - र उनीहरूले उसलाई एउटा नाजुक जिम्मेवारी सुम्पिदिए: एलिसान्ट जेलबाट बाहिर निस्किनु नागरिकहरूका लागि महत्वपूर्ण कारागार। यो गर्नका लागि, उसले फलांगिस्टहरूको एक समूह छ (युवा र आदर्शवादीहरू) जसको नेतृत्व उसले गर्नै पर्दछ। तर केहि छैन र कोही पनि तिनीहरू जस्तो देखिनेछैनन्। हुनसक्छ जीवनमा र यति धेरै युद्धमा जीवनको कारणले, हामी सबै हामी को हौं भनेर रोक्न सक्छौं।
यस्तो समयमा, ब्वाँसो हुनु मात्र ग्यारेन्टी थियो। र जहिले पनि हुँदैन। यसैले विवेकी खैरो फर उपयोगी थियो। यसले बाँच्न मद्दत गर्‍यो। रात र कुहिरो कोहि कोहि याद नलगाउन।
पेरेज-रिभर्टे एक कालो कथा बताउँछ र जासूस एक हजार पटक ज्ञात यसको आफ्नै तरिका र शैलीमा, जुन हामी सबैलाई यो पढ्नेले राम्रोसँग चिनिन्छ: छोटो वाक्यहरू वर्णनात्मक अपोजेसनको साथ लामोसँग मिल्ने; धेरै राम्रो संवाद, विशेष गरी फाल्का र उनका हाकिम, एडमिरल, मेरो लागि सबै भन्दा राम्रो चरित्र वा एक मलाई सबैभन्दा मन पर्यो; र ताल र मोडको साथ एक प्लट जुन तपाईं अनुमान गर्न सक्नुहुनेछ (वा होईन)। कथा भर लेखक को सामान्य स्ट्याम्प: उसको लोभीपन र मानव अवस्थाको ज्ञान.
एक नायक वा एक antihero को रूप मा Falcó परिभाषित मूर्ख छ। साथै उहाँलाई पेरेज-रिभर्टे, क्याप्टेन एलाट्रिस्टेको चरित्रसँग तुलना गर्नुहोस्। कार्टाजेना लेखकले अब आफ्नो अत्यावश्यक ब्याकप्याकबाट भारी भार लिन रुचाउँछन्, को पाठ्यक्रम को धेरै धेरै हो जो आफ्नो स्तर मा साझा।
मेरो Pérez-Reverte पुस्तकालय
त्यो, कालो कालो विधाको नियमित पाठक, मैले मेरो हातमा केही नयाँ पाएको महसुस गरिन. त्यहाँ Falcó जस्तै धेरै खराब छन्, र ती द्वन्द्वमा प्रस्तुत गर्दै जस्तो स्पेनी नागरिक युद्धको रूपमा चिनिन्छ, नयापन कारकलाई पनि सहयोग गर्दैन। हामी सबैलाई थाहा छ कि सबै पक्षहरू र रंगहरूको अप्ठ्यारो थिएन। मेरो विचारमा यो सम्झन अनावश्यक र थकाइलाग्दो छ।
दुष्टको रूपमा, नैतिकता र अनावश्यक अभाव ... हो, ठीक छ, हामी सबै कुनै न कुनै अवसरमा उनीहरूबाट छुटकारा पाउन चाहन्छौं र साहित्यले हामीलाई त्यो सम्भावना प्रदान गर्दछ। तर ठ्याक्कै किनभने उसले ती पत्रहरू शुरूदेखि नै स्पष्ट देखाउँदछ, यो आश्चर्यजनक होइन कि फाल्स् एक कुत्राको छोरो हो. त्यसकारण, उसले के गर्छ वा गर्दैन भन्नेमा अचम्म लाग्दैन, न त उसले न बाँकी सबै पात्रहरू नै। मेरो विचारमा, तिनीहरूले (निश्चित) चासो भन्दा बढि योगदान गर्दैनन् कसरी उनीहरू कुराकानी गर्छन्, विश्वासघात वा छैन कि गरिने छ र यदि तिनीहरूबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ।
यो केवल तपाईको लेखकको शैली, उसको उत्कृष्ट र निर्दोष गद्य र आफ्नो विशाल ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण संस्कृति, यति वास्तविक, फाइदा लिनको लागि मात्र रहन्छ। तर मलाई थप आवश्यक छ: अधिक उत्साह, बढी उत्साह, थप प्रभाव.
यसमा कुनै अचम्म छैन कि रिभर्टे चरित्रलाई निरन्तरता दिन चाहन्छन। यो देखेको र यत्तिको तीव्रताले अनुभव गरेको त्यो ब्याकप्याक खाली गर्न जारी राख्दछ। तर, मेरो छाप अनुसार, वा उसले दृष्टिकोण फरक पार्छ र यसलाई आफूले मनपराएको भन्दा आकर्षक बनाउन प्रबन्ध गर्दछ, वा फाल्का त्यहि रहन्छन्, अधिक बदमाश। र यो शर्मको कुरा हो। यद्यपि श्रृंखला भर्खर शुरू भएको छ। यो - र हुनुपर्दछ - यसलाई अधिक आकार दिनुपर्दछ।
एक खतरनाक मित्र - आर्टुरो पेरेज-रिभर्टे।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » कालो उपन्यास » फाल्का, आर्टुरो पेरेज-रिभर्टे द्वारा। "म खुट्टाको हिंड्ने बित्तिकै तिनीहरू ममाथि हिंड्छन्।"
टोम्स एस भन्यो
ठिकै छ, मैले यसलाई एकै दिउँसो उत्साहका साथ फल्कामा पढेको छु, र यो मलाई समीक्षाकर्ता जस्तो नभई हाम्रो गृहयुद्धको पृष्ठभूमि बिरूद्ध जासूस उपन्याससम्म पुग्ने धेरै मूल तरीका हो। हुनसक्छ यो हुन्छ कि उनीले भनेको कुरा सत्य हो कि उनी यसको कदर गर्ने मूडमा छैनन्। मलाई लाग्दैन कि यस जस्तो उपन्यास कहिल्यै लेखिएको थियो, न त गृहयुद्ध यस्तो गम्भीर र प्रभावकारी ढ written्गले लेखिएको थियो। र म भर्खरै एउटा फालकोडिक्ट भएँ, चरित्रले मलाई पूर्णतया टाँगेको छ। मलाई अर्कोको एक खुराक चाहिन्छ, र यसले मलाई पिरोल्दछ जुन अझै प्रकाशित हुन बाँकी छ।
Tomás S लाई जवाफ दिनुहोस्।
हारुकी मुरकामीले क्रिश्चियन एन्डरसन पुरस्कार प्राप्त गरे
समीक्षा: Curro Cañete द्वारा एक नयाँ खुशी